Jery taratra… herinandro: mafanafana na ririnina aza… | NewsMada
Manoloana ny fivoahan’ny voka-pifidianana vonjimaika sy ny fiatrehana ny fankalazana ny faha-59 taon’ny fiverenan’ny Fahaleovantena, miantso fitoniana sy firaisankinam-pirenena ny eo anivon’ny CFM. Tsy hisy fampandrosoana raha tsy eo ny fahamarinan-toerana politika. Misy ny tetikasa iarahany amin’ny Firenena mikambana (ONU) hisian’izay fandriampahalemana maharitra.
Nanolo-kevitra hanatsarana ny fifidianana ho avy, kaominaly sy monisipaly, ny KMF/Cnoe. Tsapany fa mitombo ny tsy fanarahan-dalàn’ny ankamaroan’ny mpisehatra sy ny teritery avy amin’ny mpitondra ary ny tsy fahatomombanana, rehefa mihamanakaiky ny vahoaka ny fifidianana. Takiny ny fampiharan-dalàna tamin’ny fandikan-dalàna tamin’ny fifidianana sy ireo hihevitra mbola hanao izany.
Taorian’ny fifampidinihana, nahena 500 Ar ny litatry ny solika fandrehitra, 150 Ar ny gazoala, ary 100 Ar ny lasantsy. Hafindra toerana fa tsy ho ety ampovoan-tanàna ny tobin-tsolika eny Ankorondrano. Hakarina ny tahan’ny tombom-barotry ny mpaninjara solika. Tsy hisy intsony ny fanampian’ny fanjakana ny mpandraharaha solika, ary mahazo manafatra solika mivantana ny fanjakana.
Notsiahivin’ny ambasadaoron’i Frantsa, i Véronique Vouland-E., fa manaiky ny fananganana ny vaomiera iraisana ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy hanapaka momba ireo Nosy malagasy manodidina. Amin’izany no hitadiavan’izy ireo vahaolana. Momba ny fakana an-keriny izay efa tsy misy, adidin’ny firenena ny miantoka ny fiarovana ny teratany sy ny vahiny monina ao amin’ny taniny.
Miavaka ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantena amin’ity. Eo, ohatra, ny fanasana vahiny manokana toa ny filohan’i Rwanda, i Paul Kagame; ny fanafoanana ny fiaraha-misakafo. Ankoatra izany, naverina ireo karazana hetsika toy ny kermesy karakarain’ny Tafika, ny “podium”, alim-pandihizana ho an’ny vahoaka… Tanjona ny hiarahan’ny vahaoka manerana n’i Madagasikara mifaly.
Mafanafana avokoa izany rehetra izany, na ao antin’ny ririnina aza.